जब साधारण किसानलाई ठगीको आरोप लाग्यो ! — Motivatenews.Com
जब साधारण किसानलाई ठगीको आरोप लाग्यो !
काठमाडौं – एउटा किसानले पाउरोटीवालालाई मख्खन वेच्ने गरेको रहेछ । एकदिन त्यस पाउरोटीवालाले आफूले लिने मख्खन पुरा छ की छैन भनेर जोखेछ । तराजुमा जाख्दा मख्खनको पुरा तौल रहेनछ । उसलाई झोँक चलेछ र त्यस किसानकाविरुद्धमा अदालतमा मुद्धा हालेछ ।
एक दिन उक्त मुद्धाको विषयमा बहस भयो । न्यायधिसले किसानलाई मख्खन कसरी जोख्ने गरेका छौं भनेर सोधे । किसानले उत्तर दिए, ‘खै हजुर मसँग जोख्ने तराजु त छैन । तर मैले एक पाउण्डको भाँडोमा मख्खन नाप्ने गरेको छु ।’
न्यायधिसले फेरी सोधे, ‘तिमीले मख्खन कसरी वेच्छौ त ?’ किसानले भने, ‘मैले मख्खन त भर्खरै बेच्न थालेको हँु तर त्यस पाउरोटीवालासँग भने धेरै पहिलादेखि पाउरोटी लिन थालेको हुँ । जब उसले पाउरोटी दिन्छ त्यस भाँडोमा एक पाउण्ड छ की छैन भनेर नाप्ने गर्छु । मैले जति पाउरोटी लिन्छु त्यतिनै मख्खन जोखेर दिन्छु । यदी मैले बेच्ने मख्खन कम छ भने त उसले दिने पाउरोटी पनि कम नै होला ।’
न्यायधिसले किसानको कुरा सुनेपछि पाउरोटी व्यापारीलाई दोषि ठहर गरे । ठगी गरेको ठहर गर्दै उनलाई पाँच बर्षको कैद फैसला भयो । जीवनमा हामीले त्यहि पाउँछौं जुन हामीले अरुलाई दिन्छौं ।
कुनै काम गर्नुअघि हामीले आफैसँग प्रश्न गर्नुपर्छ, ‘के मैले पाउने तलब वा ज्याला बराबरको काम दिइरहेको छु ।’ इमान्दार र वेइमानी पनि मानिसको स्वभाव बन्न जान्छ । कोही मान्छेहरु वेइमान गर्न यति सिपालु हुन्छन कि सजिलै अरुलाई ढाँट्न सक्छन् । कोही चाँही यति झुँटो बोल्छन की साँचो कुरा के हो भन्न उनीहरुलाई पत्तो हुँदैन । यसो गर्दा उनीहरु कसलाइै धोका दिइरहेका हुन्छन ? आफैलाई अरुलाई त खासै के नै हुन्छ र ?
इमान्दार चरित्र निभाउन पनि खासै ग्राहो छैन । कोही व्यक्ति घातक इमान्दार हुनुमा गर्व गर्छन । उनीहरुलाई इमान्दार हुनुमा भन्दा घातक इमान्दार हुनुमा नै आनन्द आउँछ होला ।